Wiadze Nyina Ɔsatu Bɔ JW.ORG Ho Dawur
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Maya Mfantse Mingrelian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Valencian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Wiadze Nyina Ɔsatu A Wɔdze Bɔ JW.ORG Ho Dawur
Wɔ August 2014 mu no, Jehovah Adasefo a wɔwɔ wiadze nyina kyekyɛɛ krataaba bi dze maa afofor nyaa jw.org wɛbsaet no ho enyigye. Ɔnam iyi do maa nyimpa a wɔkɔ wɛbsaet yi do no no dodow nyaa nkɔenyim bɔbor ɔha mu nkyekyɛmu 20 wɔ dɛm bosoom no mu, wobodur bɛyɛ ɔpepem 65. Wɔ wiadze nyina no, hɔn a wɔfaa wɛbsaet yi do bisaa dɛ wɔnye hɔn mbɛyɛ Bible adzesua no dodow yɛ bɛyɛ 10,000. Iyi bor nyimpadodow a wobisaa dɛ wɔnye hɔn mbɛyɛ Bible adzesua wɔ July 2014 mu no do bɔbor ɔha mu nkyekyɛmu 67! Nyimpa a wɔwɔ mbea nyina nyaa ɔsatu yi do mfaso.
Mboa a wɔdze ma hɔn a wɔrohwehwɛ asetsena mu nsɛmbisa a ohia no ho mbuae
Ɔdasefo bi a ɔwɔ Canada kyiaa Madeline wɔ lift mu na ɔdze ɔsatu krataaba a wɔato dzin, Hemfa Na Yebenya Asetsena Mu Nsɛmbisa A Ohia No Ho Mbuae? no kyerɛɛ no. Madeline kãa kyerɛɛ Ɔdasefo no dɛ, wɔ anafua ansaana adze rebɛkye no, nna ɔabɔ mpaa enyiberdo wɔ n’abrandaa do dɛ Nyankopɔn mboa no ma onnya nsɛmbisa a ɔtsetse dɛm ho mbuae. Nna oebisabisa asɔrasɔr ahorow pii dɛ wɔmboa no ma onsũa Bible no naaso hɔn mu biara annkasa noho. Annkyɛr na ɔhyɛɛ ase dɛ ɔnye Jehovah Adasefo rusũa Bible no.
Mboa a wɔdze ma hɔn a wonnyim Bible no ho hwee
Wɔ Philippines no, Rowena nye ɔbarimba bi a ofi China kasae wɔ beebi a wɔtɔn edziban. Ɔdze krataaba yi bi maa no, na ɔkyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ no dɛ Jehovah Adasefo pɛ dɛ wɔboa nkorɔfo ma wonya Bible adzesua a wonntua ho hwee no do mfaso.
Ɔbarimba no kãa kyerɛɛ Ɔdasefo no dɛ onnhun mbrɛ Bible no tse da. Nkɔmbɔ a wɔbɔe wɔ iyi ekyir no hyɛɛ no nkuran ma ɔkɔr Jehovah Adasefo ehyiadzi bi ase. Annsõ hɔ ara, ɔbarimba yi kãa dɛ ɔpɛ dɛ ohu pii fa Bible no ho, na ɔayɛ n’adwen dɛ ɔbɔtwe bi efi hɛn wɛbsaet yi do.
Mboa a wɔdze ma hɔn a wɔyɛ mmum
Guillermo, Ɔdasefo mmum bi a ɔwɔ Spain hyiaa Jorge a nna ɔnye no kɔ skuul a ɔno so yɛ mmum no. Jorge kãa dɛ ne maame wui nnkyɛree, ntsi n’adwen etu afora na ɔwɔ nsɛmbisa pii. Guillermo dze ɔsatu krataaba no bi maa no, na ɔkyerɛɛ no mbrɛ obenya nsɛm ahorow bi wɔ mmum kasa mu wɔ jw.org do, a obobua ne nsɛmbisa ahorow no mu pii. Guillermo san so too nsa frɛɛ Jorge dɛ ɔmbra nhyiamu wɔ Ahendzi Asa do. Ɔbae, na ofitsi dɛm aber no, Jorge nntotoo nhyiamu no mu da, ɔmmfa ho dɛ beebi a ɔtse kɔ Ahendzi Asa do no yɛ kilomita 60 (akwansin 37) no.
Mboa a wɔdze ma hɔn a wɔtsetse nkurabaase
Awarfo beenu bi a wɔwɔ Greenland bɔɔ kaw kakra faa hɛmba popuaba bi, na wɔdze ndɔhwer esia twaa kwan kɔr ekurabaase bi a no mu nyimpa no dodow si 280 no mu. Wɔkãa asɛm no wɔ hɔ, kyekyɛɛ nkrataaba, na woyii jw.org video bi wɔ Greenlandic kasa mu. Wɔhyɛɛ ase so nye awarfo bi a wohyiaa hɔn no yɛɛ Bible adzesua. Yɛrekasa yi, dapɛn biara wɔfa telefon do yɛ Bible adzesua mprɛnu.
Nnyɛ Dɛm Far North apaamu hɔ nkotsee na wɔyɛɛ dɛm edwuma yi. Adasefo a wɔwɔ Nicaragua yɛɛ nhyehyɛɛ dɛ wɔbɛkyekyɛ krataaba yi bi ama hɔn wɔtsetse Caribbean kwaabibir no mu a wɔkã Mayangna kasa no. Wɔdze bɔs dadaw bi a no ho atsetsew faa kwan ntutui bi do ndɔnhwer 20 a woenngyina beebiara. Iyi ekyir no wɔnantsewee ndɔnhwer 11, a atɛkyɛ mu fa kã ho kodur nkuraba no ase. Wokodur hɔ no wɔkyekyɛɛ nkrataaba na woyii video ahorow wɔ Mayangna kasa mu, ɔyɛɛ hɔn a wɔtsetse hɔ no ahobow, na hɔn enyi gyei.
Wɔ Brazil no, Estela maa ɔbarimba bi a nna orutwa mu wɔ ekuraba bi ase wɔ Amazon kwaabibir no mu no krataaba yi bi. Ɔbarimba no annkyerɛ krataaba yi ho enyigye papa, ɔgyee krataaba no, naaso ɔdze hyɛɛ no kotoku mu. Ɔnam rokɔ fie no, ne hɛmba no gya no dumii ma ɔkaa nsensanmu wɔ nsu no do. Aber a nna ɔrotweɔn dɛ mboa bɛba no, ɔkenkaan krataaba no. Ɔdze ne mobile fon kɔr jw.org, na ɔkenkaan nsɛm pii wɔ wɛbsaet yi do na ɔtwee video ahorow bi so. Nda kakra bi ekyir no, ohyiaa Estela no kun na ɔkaa kyerɛɛ no dɛ ɔnda ne yer ase mma no wɔ krataaba no ho. Ɔkãa dɛ, “Nsɛm a mekenkanee aber a nna maka nsensanmu wɔ nsu no do maa m’akoma tɔɔ me yamu kesii dɛ hɛmba fofor bae bɔboaa me. Me mba no enyi gye Caleb video ahorow no ho. Mobɔkɔ do ara akɔ jw.org no do.”
Wɔnam JW.ORG Do Kã Bible No Mu Asɛm Kyerɛ Nkorɔfo